Indlela yokuthola Herobrin e "Maynkraft": zonke izindlela ongazithatha
Uma ungenakho okuhlangenwe nakho ngokwanele emhlabeni "Maynkraft", kungase kusho ukuthi usukulungele umhlangano Herobrin engaqondakali. Labo abangavumelani ujwayelene "Maynkraft" akusho ukuthi lo muntu Amazing ngoba izwe virtual ukuqonda. Nokho, abadlali abanolwazi isikhathi eside bazi futhi baqonde ukubaluleka Herobrin njengoba iwuphawu yonke, magange ukuthola ngokuphelele zonke izindlela okungenzeka ukuthi ungathola kanjani Herobrin e "Maynkraft".
Bambalwa abadlali "Maynkraft" akazi mayelana nokuba khona kwamakamu Herobrin. Lokhu uhlamvu angaqondakaliyo kwenzeka alulona olwawo wonke umuntu, futhi lapho, isimiso, akufanele kube. Abadali yomdlalo ongaphika ngokuphelele kwalokho umlingisi lo mdlalo, kuyilapho uqhubeka ukuhlangabezana emihlabeni ehlukile. Hamba lonke legend, abadlali ukuba ziyaxoxa ngokuthi zingakwenza waphawula Herobrin ngalé ku inkungu, futhi kuba ngisho kanjani ogibeni yabo futhi ukubulala. Kodwa akagcini izama, futhi siyaqhubeka sifuna izimpendulo mbuzo "indlela yokuthola Herobrin e" Maynkraft "futhi ukuzingelwa umlingisi ukuthi umuntu ekholelwa umoya yabavukuzi efile, futhi othile ngokuvamile esabela kuye indima oseshonile mzalwane umdlalo umdali.
Konke Herobrin siwukuthi uyena unganakile ubukeka ejwayelekile. Yilokho kuyabethusa, ngoba ngaphandle kwemvume umdlali emhlabeni olulodwa kufanele kungabi nezinye izinhlamvu, futhi Herobrin ubukeka ncamashi nalowo uhlamvu yasekuqaleni "Maynkrafta". Nokho, kukhona omunye ngaphandle - emehlweni akhe, akekho umfundi, okungukuthi, asemhlophe ngokuphelele. Ezinye ofakazi bathi futhi ziyavutha esinika isithombe iqhawe Ayindida futhi engaqondakali nakakhulu.
Herobrin livela kaningi, kudlule nasemkhawulweni ka ezibukwayo umdlali isibuyekezo, kunenkinga nge indlela yokuthola Herobrin e "Maynkraft" isikhathi eside ukuba abantu bahlale bemazi - ke njalo abantu bahlulekile ngisho shazi yonke into eziyibonayo kakhulu. Kodwa manje konke okushintshile, futhi ahlangane Herobrin sekulula kakhulu.
Indlela yokuqinisekisa umhlangano yetinsita
abadlali abaningi 'Maynkraft "ukuphupha ukuhlangabezana kanjani Herobrin, futhi kancane kancane kusukela uhlamvu ongaqondakali, he jikisa ejwayelekile ukuzijabulisa show --Inthanethi isiba izindaba yivelakancane ongaqondakali futhi kuyathusa, okuyinto musa izibalo eziqondile nge isimo sangempela. Phela, ngaphambi Herobrin babekholelwa into Amazing, yisithunzi yangempela umdlalo. Kodwa manje bazama zonke ufuna ukufunda indlela yokuthola Herobrin e "Maynkraft", futhi onjiniyela ungafuni uphuthelwe ithuba elikhulu kangaka ukuze uthole futhi propiarit iphrojekthi yayo ayesevele aziwa.
Ngakho-ke, izinguqulo emidlalweni ukudala umhlaba angakunika umuthi inhlanganisela ethile ukuthi ukwandisa amathuba umhlangano Herobrin futhi ngezinye izikhathi bazakhela abalingiswa ezimbili ezifanayo.
Kuyaqhubeka ukuthungathwa umphandu Herobrin
Abantu abafuni ukuxosha isipoki, kufanele sibonise lapha futhi manje, ngakho-ke, ngo-izinguqulo umdlalo ungavele uhambe beyofuna ekhaya yohlamvu edume. Maynkraft izinkundla ' "" kanjani ukuthola ikhaya Herobrin "- omunye wemibuzo ethandwa kakhulu, kodwa impendulo silula.
Kuyinto kudingekile kuphela ukubhalisa, ukuthi uma udala umhlaba futhi insimu yalo kwakukhona isigodi, bese edolobhaneni ibandla ukuthi nifuna futhi abadinga usizo. Phambi lelibandla, udinga ukuqala ukumba umgodi, uze siyakhubeka ematsheni noma ngeke uthole amanzi. Esimweni sokuqala, udinga ukuthatha Ipiki akuqede amatshe, kanti phambi ngeke ezitebhisini evulekile - ofika kuleli ke, uzothola ngqo umphandu Herobrin. Nokho, uma wena shaya amanzi, eya ezinganekwaneni yendlu iyoba ngisho emifushane - uzodinga kuphela ukubhukuda kwamanzi. Uma uzithola phezu, uyobe ngokushesha ubone Herobrin.
Njengoba isonto ihlobene enye indlela esingayibona ngayo Herobrin - kuba lula kakhulu zangaphambilini ezimbili, kodwa amathuba okuphumelela lomcimbi lingaphansi kakhulu. Ngaphezu kwalokho, ungabona Herobrin, kodwa hhayi emzini wakhe, ukuze labo abafuna ukuthola ilungelo olwenzeka endaweni uhlamvu ongaqondakali, kungcono ukuya kwamanye imikhandlu. Kodwa uma udinga kuphela ukubheka amehlo ezingenalutho Herobrin, uzodinga "Maynkraft" 1.5.2.
Indlela yokuthola Herobrin? Woza ebusuku esontweni, esemgwaqweni edolobhaneni bese ulinda. Kungenzeka ngesikhathi abanye emkhathizwe, uzophawula sibalo usongene. Uzodinga ukubukela kakhulu ngokucophelela njengoba miss Herobrin kungaba lula kakhulu.
Legend of umvukuzi
Uma ulandela le nganekwane owaziwa ukuthi Herobrin - lena umoya emayini, kunengqondo ukuthi kubalulekile ukubheka okwami. Nokho, ukuthola ngokwakho wena cishe aphumelele - kusenzima hhayi evamile, futhi Enchanted! Ngakho-ke, "Maynkraft" 1.5.2 Herobrin yedwa owayengangena ukukuholela khona. Ukushayela ukubonakala kwakhe ngesikhathi esifanayo akukashintshi - ungabona kuphela emkhathizwe, futhi imizamo bakwazi ukusondela kuye ukusebenzisa ukuze uzoqala ukuzulazula. Uma ukuxosha isikhathi eside ngokwanele, ngemuva kwesikhathi esithile uzothola emnyango emayini. Isici yalesi ikhaya Herobrin ukuthi emnyango emayini uyingcebo zeminyaka. Nokho, kuleli qophelo kudingeka uqaphe kakhulu, ngoba umoya emayini, ukuyengela wena ku umphandu wakhe, yebo, ngeke azame ukumbulala. Abanye baqunga isibindi ngisho wakwazi ukuthatha nabo kancane amagugu, kodwa kakhulu zingahambi kahle ukuze bahlale bephila.
Njengoba yaziwa, manje Herobrin zingatholakala kunoma iyiphi izwe, uma uzibekela ibhekwa kwesokudla futhi zibeka inhlanganisela ilungelo ekuqaleni umdlalo. Maud ku "Maynkraft" Herobrin lutholakala esidlangalaleni ku-intanethi, futhi akayedwa. Ngakho-ke, kuzo zonke yandiswe kungenzeka kufanele kuphela ukukhetha okungcono. Futhi phakathi kwazo zonke izenzakalo ezikhethekile bungabonakala, okwenezela umdlalo Lagoon Valley amakhowe. Lona mod ezenezela ezweni ezimbili Herobrin, kanye ngempango Amazing lehla ukusuka kubo. Ngakho, okokuqala kudingeka uthole ukuthi ichibi efanayo, bese uya ku eya ebhange esilandelayo. Kulapho uzothola brand name Herobrin - mbhoshongo emanzini. Waba ezidumile emhlabeni wonke kuzo zonke izindawo kungenzeka kwesokunxele mbhoshongo eyenziwe noma iyiphi impahla. Abakwazi hang emoyeni, olele phansi noma ukuntanta emanzini - kodwa kube inkomba yokuthi lokho ayengase akuthole ezweni Herobrin. Endabeni ethize mbhoshongo, ngempela ubukeka amazing, ungasho ngisho abanamanxeba abulalayo enhle, ngoba uma zasmotrites kuso, khona-ke kuyoba lokufa at ezandleni Herobrin kuqala. Gwema lokhu ukufa kungenzeka, kodwa udinga yonke ikhono lakho futhi dexterity, kanye service enhle. Ngakho, sibheke mbhoshongo, kodwa musa ngigqolozele, futhi ngemva kwesikhashana niguquke - kuyoba Herobrin eduze nawe. Hlula kuye, khona-ke sehla zempi ngokwanele enamandla, inkemba nomnsalo nemicibisholo. Ehlome ngamathuluzi okuthola le imishini, ungaqala lokushaya mbhoshongo.
Indlela ukubulala Herobrin wesibili?
Lapho uzobe ezandleni igiya lokuqala Herobrin, udinga ukuqala ukuhlasela kwabo ku mbhoshongo amanzi. Ngemva kwesikhathi esithile aphume kuyoba Herobrin yesibili, kodwa ungacabangi ukuthi ujoyine naye ekulweni evulekile - ngisho ne imishini enamandla kangaka awukwazi ukunqoba it! Ngakho kufanele sizinike iqhinga - ngizamhuga eseduze eweni eliphakeme, bese kabusha kusuka lapho. Ukuwelwa esisodwa, noma kunjalo, musa uphumule - ke unokuphila ngokwanele ukuba aphinde avuke futhi niqhubeke kuhlasela wena. Phinda iqhinga, bese ukuqoqa ngempango futhi asuse yonke imicebo mbhoshongo uqobo. Njengoba ubona, e inguqulo "Maynkraft" 1.5.2 izindlela ku Herobrin ezithakazelisayo kakhulu futhi engavamile.
Indlela ukushintsha kwesikhumba e "Maynkraft" (ezinguqulweni ilayisensi futhi pirated yomdlalo)
Sebenzisa ikhodi ukuthuthukisa umsebenzi e "The Sims 4"
Imidlalo yama-computer, izinhlamvu. "The Walking Dead"
Kanjani ukuze uthole izingodo lithi wanqunywa. "Skyrim": ukwakhiwa
Endlini Modern "Maynkraft" nge endlini Modern
Nissan Micra - izinga imoto icwecwe, eside lukhona
Izidakamizwa - Iyini? ngezigaba zabo nangenxa yokuthi amaqembu
Indlela futhi yokusetshenziswa "Loraksona". Analogs kanye nokubuyekeza
Fundisa ingane ukuba ibhodwe - Kulula noma kunzima?
Ukungcola kwamanzi kanye nemiphumela yabo emzimbeni
"Technonikol": putty ukuze ungangenisi amanzi
UMikhail Galustyan: I-Filmography ne-biography
Cabanga indlela yokwenza, bamphathele nezimbali
Beat e ithenisi. ibulawa ngesihluku futhi amagama nemishini
"Impi Engavamile" i ... "Impi Yempi" ka-1939-1940. E-Western Front
Fish sauce - ngesisekelo cuisine Asian